Madaxweyne Qoorqoor oo fagaare kula hadlay reer Cadaado (SAWIRRO) | Universal Somali TV
Madaxweyne Qoorqoor oo fagaare kula hadlay reer Cadaado (SAWIRRO)
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud.
Boqolaal ka mida dadka deegaanka ayaa wafdiga Madaxweynaha Galmudug ku soo dhaweeyay afaafka hore ee Aqalka Madaxtooyada Cadaado.
Soo dhaweyntii maanta wafdiga Madaxweynaha loogu sameeyay Magaalada Cadaado waxay ahayd mid ka mid ah soo dhaweyntii ugu quruxda badneyd ee loogu sameeyo Gobolada Dhexe, intii ay safarka ku marayeen.
Madaxweynaha oo la hadlay dadkii soo dhaweeyay ayaa kaga mahadceliyay soo dhaweynta aynaan u kala harin, ee ay ugu sameeyeen magaalada.
"Reer Cadaado waxaan idinkaga mahadcelineynaa sidaad noo soo dhaweyseen, aadka iyo aadka u quruxda badan, qiimaha badan ee aadka u diiran, waa idinkaga mahadcelineynaa." Ayuu yiri Madaxweynaha Galmudug.
Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), Madaxweynaha Galmudug ayaa dadka reer Cadaado u sheegay in socdaalkoodii deegaanada Galmudug uu ahaa mid nabadeed, xog ogaalnimo iyo wadatashiba.
"Dhammaan reer Cadaado safar baan halkaan ku marnay, waxaan ku soo kala bixinay dhul aad u ballaaran oo Galmudug ah. Safar nabadeed, safar xog ogaalnimo iyo safar wadatashi ayuu ahaa." Ayuu yiri Madaxweynaha.
Isagoo ka waramayay sida uu safarkooda ugu soo idlaaday ayaa wuxuu yiri "Dhammaan reer aw Galmudug wuxuu ugu soo dhamaaday si guul ah, idina si guul ah ayaan idinku soo gaarnay, dhinaciinaa ka qabtiin. Reer Cadaado waxaad tihiin weliba dadkii ama magaaladii Galmudug lagu mideeyay. Qiimo gaar ahaa leedihiin, dowladnimo jaceylka iyo soo dhaweynta dowladnimada waala idinku yaqaan."
Madaxweynaha oo la dardaarmayay reer Cadaado ayaa yiri "Waxaan idin wadnaa Galmudugtii oo mida, oo wax gowsa, waxna idin-gasha. Waa midnimadii aad ku taameyseen, bilowgii jecleydeen, maantana fursad bay noo wada tahay, aan wada ilaalino, aan wada guntano, aan u wada istaagno wadajirkeena iyo sharafkeena."
Waxaa uu intaa ku daray "Haddii meel lagu arko shaqaaqo yar ama wax cilad keenaaya hala suuliyo, sida ugu haboon Insha'Allah. Reer Cadaado waan is wareysaneynaa, waan idin nimid, dhulaa weli safar sii nahay, hadana in ku filan baan is wareysaneynaa, waana dageynaa. Mamaulka Degmada, Odayaasha Dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waan is wareysaneynaa Insha'Allah. Nabadda, wadajirka, midnimada iyo Galmudug ayaan ilaashaneynaa. Reer Cadaado guul baa noo ballan ah, gacmaha oo is qabsanaa noo ballan ah. Insha'Allah aan xaqiijino meeshaan u socono."
Kan-xigaVilla Somalia oo muddeysay shirka Mad...
Kan-horeWasiir Caruush oo daahfuray qorshaha ...
54,019,219 unique visits